ငပလီဘူးသီး-၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » ငပလီဘူးသီး-၁
Posted by ဂႏၶာရီ ၾဆာအုပ္ on Apr 29, 2013 in Photography, Travel | 11 comments
ငပလီ beauty ပြောတာပါဗျို့.. သွားတဲ့ ရက်တွေထဲမှာ သုံးရက်က ပင်လယ်ထဲ တစ်ရက် က သံတွဲ သွားဖြစ်တာ မို့လို့ ကမ်းခြေကိုတော့ သိပ်မရိုက်လာခဲ့ ဖြစ်ပါဖူး.. ဒါကြောင့်ရှိတာလေးပဲ ကြွားလိုက်ရကြောင်းပါ
၁။ ဝင်ကစွတ်ဆိုတဲ့ တော်တော်ကဲတဲ့ကောင်
၃။မော်ဒယ်မရှိလို့ ကွကိုယ် လုပ်လိုက်တယ်
၅. လှည်းနဲ့ ကမ်းခြေ
၆။ အုန်းတော (HDR နဲနဲ ကြွေးထားတယ်)
၁၀။ ညနေခင်း (HDR ကြွေးထားတယ်)
၁၅။ long exposure
f8,15 sec,ISO 200, ND 8
၁၇။ kids and sea
၁၈။ the last moment
ငပလီကမ်းစပ်ကိုတော့ ညနေတိုင်းလိုလိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်.. ဝင်သွားတဲ့ နေလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီး ပုစွန် အစိမ်း သုတ်ကလေးနဲ့ ဘီယာလေး သောက်ရင်း လေညင်းခံ ရင်း အမတ်မင်း. ကလုလင်.ကရဲစည်. ဦးကျောက်တို့ ကို သတိရလာတာနဲ့ ၃ ခွက်လစ်မစ်ထက် ပိုပြီးသောက်ခဲ့ပါသဗျို့….
ကတောက်စ် ရက်စက်တဲ့ ဆြာအုပ်…
သောင်စပ်မှာ ညနေခင်းဆည်းဆာကို ပုစွန်အစိမ်းသုတ်ရယ် ဘီယာရယ်နဲ့ မြည်းသွားတယ်…
အမှန်က ငါးကင်လေးနဲ့မြည်းလိုက်၊ သူတို့အခေါ် ရေကြက် (ပြည်ကြီးငါး)၊ ရေမျောက်(ရေဘဝဲ)သုတ်လေး နဲ့မြည်းလိုက်၊ ပုစွန်ကင်လေးနဲ့ စွဲလိုက် ရှလွတ် ပြောရင်းတောင် သွားရေကျလာပြီ.. ဟိ
တွားဂျဂျို့ ဒို့ ၂ ယောက်တည်းပဲ ဟားနီးမူး ခရီး။..
ဟို ရောက်မှ ဒီ ဓာတ်ပုံတွေထဲလောက်မ လှရင် လိန်ဗျံ လက်မှတ် ပြန်လျော်ပါ။ ဒါပဲ
ပုံတွေကြည့်လို့ အရမ်းကောင်းပါတယ် …
ကြည့်လို့မဝလို့ ပုံကြီးထုတ်ပြီး နံရံပေါ်မှာ ကပ်ထားချင်စိတ်တောင် ပေါက်မိပါတယ်..
တစ်နေ့ကို မန်ဘာတစ်ဦးသည် ပို့စ် ၂ ခု ထက် ပိုမတင်ရဘူးနော် ..
မဝေဝေရေ သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားလို့ပါ.. ပထမတော့ တစ်ရက် တစ်ပို့စ်တင်မလို့ပဲ ရှုပ်ပါတယ် ကွာဆိုပြီး အကုန်တင်လိုက်တာ.. ပွန့် တိုးအောင်လုပ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကျွန်တော်ကလဲ ၃/၄ လလောက်နေမှ တခါလောက် ထတင်တတ်တာဆိုတော့ သဂျီးခွင့်လွှတ်မယ်ထင်ပါတယ်
ရိုက်သမျှ ပုံတွေက အကုန်လုံးကို လှနေပါပေါ့လား
ငပလီ ဘူးသီး ဆိုလို့လာကြည့်တာ ဘူးတီးပုံလဲတွေ့ဖူး
ဘူးတီးမှ အရီးလာမတော်နဲ့ ဒါဗြဲ
ဝိုးပုံဒွေအားလုံးလှတယ်။ ဘူးသီးဆိုလို့ ဘူးသီးကြော်ဆိုင်မှတ်တာ။ ဘူးသီးကြော်များရောင်းတော့မို့လားလို့။
ပုံလေးတွေအရမ်းလှတယ်… ပိုစ့်ကဒ်ထုတ်လို ့ရတယ်.. Photo Gallery လေးလုပ်ထားဖို ့ကောင်းတယ်..
ပရိုဆိုတာ ဒါမျိုးကို ခေါ်တာလို့ ပြလိုက်သလိုပဲ။
စောင်းကောင်းတော့ ဆိုင်း ဆိုသလို………
ပန်းချီကောင်းတော့ ဓာတ်ပုံကားချပ်လို လှတယ်။
ဓာတ်ပုံကောင်းတော့ ပန်းချီကားချပ်လိုပဲ လှပါပေ့။ :hee: